Sifunda ukwenza i-mockups ngemifanekiso yethu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ku inqaku langaphambilir siyifundile i Intsingiselo yegama elithi mockup kunye nokubaluleka kokusetyenziswa kwayo ukubonisa izindululo zethu kumxhasi.
Ukuba unomdla wokwenza i-mockup kodwa ungazi ukuba ungayenza njani, nantsi tutorial yamanyathelo alula kakhulu ukuze ukwazi yenza i-mokcup yakho. Amaxesha amaninzi asifumani kukhuphelwa mockups ezihambelana neemfuno zethu, okanye ziyahlawulwa kwaye aziweli kuhlahlo-lwabiwo mali. Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ezi fotomontages zisetyenziswa ngokuchanekileyo ukunciphisa iindleko, okanye zinendleko zero. Ke ngoko, akukho sizathu sokutyala imali kuzo. Ngenxa yeso sizathu Siza kukufundisa indlela yokusebenzisa imifanekiso yakho.
I-Photoshop yokwenza i-mockups yethu
Inyathelo lokuqala ekufuneka ulithathile thumela iifayile ngaphandle, Kucetyiswa ukuba ku jpg. Emva koko Siza kuvula iPhotohop, inkqubo efanelekileyo yokwenza izidalwa zethu. Siza kubeka umfanekiso apho sifuna ukwenza i-photomontage.
Nje ukuba umfanekiso uvuleke, siya kurhuqa i zovimba kwitafile yomsebenzi, ukuhlela kamva.
Inyathelo elilandelayo yingcebiso eya kuthi isincede fumana iibhentshi. Inemizila yokuzoba, oko kukuthi, ukumakisha umbono "x" kunye no "y" wefoto ukuze sikwazi ukugqwetha imifanekiso ngokuhambelana nembono yomfanekiso oyintloko.
Njengoko sinokubona emfanekisweni, zenziwe imigca ethe tyaba kwaye nkqo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukusikhokela nokwenza umsebenzi ube lula.
Sinezinto ezimbini esinokukhetha kuzo, nokuba ukhethe yonke imifanekiso okanye uhambe nganye nganye. Nje ukuba sikhethwe, siya kwibar ephezulu kwaye silandele le ndlela ilandelayo:
Njengoko sinokubona kumfanekiso ongezantsi, singazigqwetha izinto ngokuxhomekeke kwimbono esiyifunayo. Ukucofa kunye nokutsala iikona Ukusuka kwisikwere esibonakalayo sinokuyiphumelela ngokutsala sikuthandile.
Lumka kuba ukuphazamiseka kukhulu kakhulu, isiphumo sinokungaqhelekanga okanye sigqwetheke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Sifunda ukwenza eyethu indlela
Umfanekiso ongenazandla weLouvre